Tsy fanarahan-dalàna : Sinoa roa lahy tratra nampiasa pasipaoro hosoka | NewsMada
Tsy fanarahan-dalàna : Sinoa roa lahy tratra nampiasa pasipaoro hosoka
Teratany sinoa roa lahy, tsy manana fahazoan-dalana hipetraka eto Madagasikara, no tratry ny zandarimariam-pirenena ao amin’ny « Brigade police de la route » Maevatanana, ny 18 novambra teo tamin’ny 8 ora sy sasany maraina. Tsy manana taratasy ara-dalàna ireo Sinoa ireo…
Rehefa nosavaina ny fahazoan-dàlana mitondra fiarakodia an’ilay Sinoa mpamily, tsy afaka nampiseho izany izy satria tsy manana. “Rehefa nojerena koa ny momba ny fahazoan-dalan’izy ireo mipetraka eto amin’ny Nosy « visa de séjour », efa lany tamin’ny 14 novambra teo ny an’ny iray raha nampiseho « passeport » tsy azy fa an’ny Sinoa hafa kosa ilay iray”, hoy ny zandary.
Notazonina ao amin’ny biraon’ny zandary, noho izany, izy roa lahy ireo ary natao ny famotorana azy ka maromaro ny fandikan-dalàna nanaovana fitanana an-tsoratra azy ireo. Anisan’izany ny fitondrana fiara tsy misy fahazoan-dalana, “visa” lany daty ary fampiasana pasipaoro hosoka. Atolotra ny fampanoavana eo anivon’ny tribonaly ambaratonga voalohany any Maevatanana, anio, ireo Sinoa ireo.
“Marolafy ny andraikitra sahanin’ny ZP ka na ambanivohitra na an-drenivohitra, mikaroka hatrany ny fandikan-dalàna sy misoroka izany tsy hiseho izy ireo. Voakasiky ny andraikiny feno ihany koa ny momba ny « surveillance du territoire” ao anatin’ny atao hoe “police administrative” ary tafiditra amin’ny hoe « police des étrangers », ary manerana ny Nosy no hanatanterahany izany noho ireo zandary izay misandrahaka manerana ny Nosy”, hoy ny zandary nitondra fanazavana.